Chii chinoita kuti kubudirira kwemashure backlink?
Kana zvasvika pakutsvakurudza kweSearch Engine Optimization (SEO), huwandu hwehupano hwehupenyu huri pakati pezvinhu zvinoshandiswa pakushandiswa zvinoshandiswa neGoogle kusarudza imwe nzvimbo yebhishopu yemakero munzvimbo dzeSERPs. Ndiko kushanda nzira yakakodzera ye backlink inopindirana nekufambira mberi kwechokwadi mukuvandudza kwekutsvaga kwepamusoro kwepamusoro kune chero imwe imwe nzvimbo inoshandiswa. Tichifunga nezvekuti kune mazana maviri ematongerwo ematongerwo ezvinhu zvakasarudzwa nehutsva guru rekutsvaga kwenyika kwezvino, chirevo ichocho pamusoro pekukosha kwekutanga kwehutano hwemashure hwakanaka chaizvo, handizvo here? Zvechokwadi, kukurumidza kukurumidza uye nyore nyore backlink urongwa huchava huwandu hwekunogona kukupa hutsika hwehutano hwakanaka. Uye zvinoreva kuti mabhii makuru ekutsvaga (akafanana neGoogle pachake, uyewo Yahoo, kana Bing) ari kukunda webhusaiti yako kana bhuroti pasi pasi pezita reSERPs. Asi chii chinokonzera kubudirira kwekugadzira kambani yekugadzira? Ndinotenda kuti urongwa hupi hwekudzokera shure hunogona kushanduka nyore nyore kuti hubudirire kuburikidza neververaging simba rezvinyorwa zvakagadzirwa.
Hapana chikonzero chekutaura izvozvo kubva pakuona kwekuvakwa kwechikwata, kwete mawebsite kana mablogiti angave akaenzana nekupa chiratidzo chekusimbisa iyo injini yekutsvaga. Ndicho chikonzero vazhinji vevanhu vose vanoda kubatanidza mamwe nemamwe magwaro ane ruzivo rwakasimba muvhesi yepamusoro, masimba ekutonga, uye PageRank. Saka, sei kuvimbisa nzira yako ye backlink inonzwisisika kukwanisa kutengesa pane zvakakodzera zvekushamwaridzana? Nokuita kuti irambe ichishanda uye ichikwirirana neyakarurama. Pakati pezvimwe zvemashoko ezvenhau, Ndinokurudzira Cision kuti iongorore nzvimbo dzepamusoro dzinobvumirana nekambani yako kana yekarakiti. Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kuchenesa vose vanogona kugadziriswa kwehutano hunosvika nenzira dzakasiyana-siyana pamusoro pekambani, mawebsite ayo, hukuru hwevateereri, mazvipo zvino, zvipupuriro, nezvimwe.
Waiziva here kuti kuvaka sarudzo yako ye backlink yakakonzerwa nevatungamiri vakanaka mumakambani ako kana mucheki yemisika kunogona kukubatsira kuvaka chivimbo chakasimba? Kuisa muChirungu Chisinganzwisisiki, mikana yako yevatengi ingangowedzera kukura kuva vatengi chaivo, kana webhusaiti yako ichitaura kana yakabatanidzwa kubva kune anovimbwa uye ane kodzero yechitatu. Ndezvipi zvakare - izvi zvinenge-zvinowanikwa "nhepfenyuro" mharidzo yakawanda kwazvo kudarika chero ipi zvayo yakabhadharwa inobudiswa mune zvenhau. Ingozvitora zvishoma - mharidzo inovimbwa nayo ndeye pakati pezvinhu zvakakosha zvine simba guru pane zvaunotarisa nevateereri uye zvisati zvasarudzwa zvokutenga kusarudza.
Kushanda pamashizha akawanikwa hausi kunetsa sezvamungafunga. Kutaura zvazviri, paisazove nemafambisirwo emagariro anodiwa nguva yekudikanwa kwevhidhiyo, zvichida kuti ibudirire kubudirira. Zvose zvaunoda pano ndezvokuwana uye kukwanisa kupindura pamikana yekutambira yakawanikwa, iyo inowanzoendeswa nevatapi venhau. Nenzira iyo, ndinokurudzira kushandisa maIndaneti zvishandiso seHARO ("Kubatsira Reporter Out"), uyewo ProfNet - Ndakazviona zvose zviri zviviri zvakakodzera kukangobva kubudiswa kwebhuku uye mamwe ecommerce-based projects. Ingosayina pazvivako izvi uye ugova mvumo chaiyo mumakambani ako kana misika yemusika - gamuchira zvikumbiro zvezuva nezuva kubva kune vanokurudzira zvakanyanya kutsvaga kuti nyanzvi dzinobvunzurudzwa kana kuti dzinowanikwa mumashoko avo anozivikanwa zvikuru, uye inogamuchira zvimwe zvepamusoro zveReprand backlink for that Source .